Vaginal Itchiness - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မတျောတရျောနရောတှငျ ယားယံခွငျး (အပိုငျး ၁)
စိုးစိုးတဈယောကျ ဒီနဂေ့ဏာမငွိမျ။ စာသငျခနျးထဲလညျးဘာကိုမှအာရုံမစိုကျနိုငျ။
ဒါကို သူငယျခငျြးမိုးမိုးက ရိပျစားမိတော့”စိုးစိုး နငျဒီနဘေ့ာဖွဈနတောလဲ? အိမျသာခဏခဏသှား၊ တဈမှိငျမှိငျနဲ့ပါလား။”
အဲ စိုးစိုး ထိတျထိတျပွာပွာနဲ့”မိမိုးရယျငါအတျောသိသာနသေလား? အမှနျတော့ငါမတျောတရျောနရောမှာယားနလေို့၊ ၂ရကျလောကျရှိပွီ၊ ပိုပိုဆိုးလာလို့”
မိုးမိုးလညျး “အဲ့ဒါဆို ငါ့အဈမ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျကွညျ့ပါလား၊ ကြောငျးအပွနျအတူသှားမယျလေ၊ မိနျးကလေးခငျြးဆိုတော့ နငျအေးဆေးသာဆှေးနှေးပေါ့” စိုးစိုးလညျး” အေးပါဟယျ ငါလဲ ပြောကျခငျြနပွေီ”
ကြောငျးဆငျးတော့ သူငယျခငျြး ၂ယောကျ မိုးမိုးအမ ဒေါကျတာစုဆီ ခြီတကျကွလသေညျ။
ဆရာဝနျမလေးက စိုးစိုးကို ကွညျ့ပွီး နမေကောငျးပုံပေါကျမနတေော့
“လာ မိမိုးတို့ လမျးကွုံဝငျလညျတာလား?”
စိုးစိုးလညျး ” မဟုတျပါဘူးဒေါကျတာ သမီးတော့ ဒုက်ခပဲ မတျောတရျောနရောမှာယားနတော ဆေးခနျးလညျးမပွရဲ၊ ပွရငျလညျး အောကျပိုငျးလှနျကွညျ့မှာကွောကျ၊ အဖွူတှကေလညျးဆငျး၊အပြိုဖွဈပွီးဒါမြိုးဖွဈတတျလားဒေါကျတာ??၊
“ဖွဈတတျပါတယျ ညီမလေး၊ မမအရငျရှငျးပွမယျနျော”
“မိနျးမကိုယျယားရငျ အဖွူဆငျးမဆငျးအရငျမေးပါတယျ။ အဖွူဆငျးရငျ Trichomonas ပိုးဝငျတာ၊ Candida မှိုစှဲတာဖွဈနိုငျတယျ။ ရာသီမလာခငျယားရငျ မှိုဖွဈနိုငျပွီး၊ ရာသီလာပွီးရငျ ပိုးဝငျတာပိုဖွဈနိုငျတယျ။
ဒိနျခဲလို အဖတျအဖတျတှေ တှရေ့တတျတယျ။( အဖွူဆငျးတယျပဲချေါကွပါတယျ)
မိနျးမကိုယျဝနျးကငျြမှာ နီရဲပွီး ယောငျနတေတျပါတယျ။
မှိုသတျဆေးကို မိနျးမကိုယျထဲ ဆေးတောငျ့ထညျ့တာ၊
အဖွူဆငျးတာကလညျး မြားတယျ၊ အနံ့နံတယျ၊ တခါတခါ အညိုရောငျတှဖွေဈတတျတယျ။
မိနျးမကိုယျ ယောငျတယျ၊ နီတယျ။လိငျဆကျဆံရငျ နာကငျြလာတယျ။
အိမျထောငျဖကျရော၊ ဖွဈတဲ့သူကိုပါ ပိုးသတျဆေး ၁ပတျလောကျအထိ တိုကျရပါတယျ။
ပိုးပဲဝငျဝငျ၊ မှိုပဲစှဲစှဲ အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့တော့
မိနျးမကိုယျကို ဆပျပွာရယျ၊ ရရေယျနဲ့ စငျအောငျဆေးရမယျ။
အတှငျးခံကို လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့ ခညျြသားလေးတှရှေေးဝတျသငျ့တယျ။
စိုးစိုးလေးက အပြိုဆိုတော့ မှိုစှဲတာဖွဈနိုငျတာပေါ့၊ မမ လိုတဲ့ဆေးတှပေေးလိုကျမယျနျော။”
စိုးစိုးလညျး ဝငျးပတဲ့မကျြနှာနဲ့ “ခုမှပဲ စိတျခမျြးသာတော့တယျ ဒေါကျတာရယျ။ ဒါနဲ့ သမီးအမကွတော့ အဖွူမဆငျးပဲယားလို့တဲ့ ၊ မမကိုလာပို့ရငျး ဒေါကျတာဆီက ကနျြးမာရေးဗဟုသုတတှေ တဈခါပွနျနားထောငျရမယျ”
ဒေါကျတာစုလညျး ” ဟုတျကဲ့အခြိနျမရှေးလာပါရှငျ” ဆေးခနျးလေးလညျး မိနျးမပြိုလေးတှေ ရီသံနဲ့ စိုပွညျလြှကျ
မတော်တရော်နေရာတွင် ယားယံခြင်း (အပိုင်း ၁)
စိုးစိုးတစ်ယောက် ဒီနေ့ဂဏာမငြိမ်။ စာသင်ခန်းထဲလည်းဘာကိုမှအာရုံမစိုက်နိုင်။
ဒါကို သူငယ်ချင်းမိုးမိုးက ရိပ်စားမိတော့"စိုးစိုး နင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ? အိမ်သာခဏခဏသွား၊ တစ်မှိင်မှိင်နဲ့ပါလား။"
အဲ စိုးစိုး ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနဲ့"မိမိုးရယ်ငါအတော်သိသာနေသလား? အမှန်တော့ငါမတော်တရော်နေရာမှာယားနေလို့၊ ၂ရက်လောက်ရှိပြီ၊ ပိုပိုဆိုးလာလို့"
မိုးမိုးလည်း "အဲ့ဒါဆို ငါ့အစ်မ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါလား၊ ကျောင်းအပြန်အတူသွားမယ်လေ၊ မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ နင်အေးဆေးသာဆွေးနွေးပေါ့" စိုးစိုးလည်း" အေးပါဟယ် ငါလဲ ပျောက်ချင်နေပြီ"
ကျောင်းဆင်းတော့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက် မိုးမိုးအမ ဒေါက်တာစုဆီ ချီတက်ကြလေသည်။
ဆရာဝန်မလေးက စိုးစိုးကို ကြည့်ပြီး နေမကောင်းပုံပေါက်မနေတော့
"လာ မိမိုးတို့ လမ်းကြုံဝင်လည်တာလား?"
စိုးစိုးလည်း " မဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာ သမီးတော့ ဒုက္ခပဲ မတော်တရော်နေရာမှာယားနေတာ ဆေးခန်းလည်းမပြရဲ၊ ပြရင်လည်း အောက်ပိုင်းလှန်ကြည့်မှာကြောက်၊ အဖြူတွေကလည်းဆင်း၊အပျိုဖြစ်ပြီးဒါမျိုးဖြစ်တတ်လားဒေါက်တာ??၊
"ဖြစ်တတ်ပါတယ် ညီမလေး၊ မမအရင်ရှင်းပြမယ်နော်"
"မိန်းမကိုယ်ယားရင် အဖြူဆင်းမဆင်းအရင်မေးပါတယ်။ အဖြူဆင်းရင် Trichomonas ပိုးဝင်တာ၊ Candida မှိုစွဲတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ရာသီမလာခင်ယားရင် မှိုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ရာသီလာပြီးရင် ပိုးဝင်တာပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒိန်ခဲလို အဖတ်အဖတ်တွေ တွေ့ရတတ်တယ်။( အဖြူဆင်းတယ်ပဲခေါ်ကြပါတယ်)
မိန်းမကိုယ်ဝန်းကျင်မှာ နီရဲပြီး ယောင်နေတတ်ပါတယ်။
မှိုသတ်ဆေးကို မိန်းမကိုယ်ထဲ ဆေးတောင့်ထည့်တာ၊
အဖြူဆင်းတာကလည်း များတယ်၊ အနံ့နံတယ်၊ တခါတခါ အညိုရောင်တွေဖြစ်တတ်တယ်။
မိန်းမကိုယ် ယောင်တယ်၊ နီတယ်။လိင်ဆက်ဆံရင် နာကျင်လာတယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်ရော၊ ဖြစ်တဲ့သူကိုပါ ပိုးသတ်ဆေး ၁ပတ်လောက်အထိ တိုက်ရပါတယ်။
ပိုးပဲဝင်ဝင်၊ မှိုပဲစွဲစွဲ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့
မိန်းမကိုယ်ကို ဆပ်ပြာရယ်၊ ရေရယ်နဲ့ စင်အောင်ဆေးရမယ်။
အတွင်းခံကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ ချည်သားလေးတွေရွေးဝတ်သင့်တယ်။
စိုးစိုးလေးက အပျိုဆိုတော့ မှိုစွဲတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့၊ မမ လိုတဲ့ဆေးတွေပေးလိုက်မယ်နော်။"
စိုးစိုးလည်း ဝင်းပတဲ့မျက်နှာနဲ့ "ခုမှပဲ စိတ်ချမ်းသာတော့တယ် ဒေါက်တာရယ်။ ဒါနဲ့ သမီးအမကြတော့ အဖြူမဆင်းပဲယားလို့တဲ့ ၊ မမကိုလာပို့ရင်း ဒေါက်တာဆီက ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေ တစ်ခါပြန်နားထောင်ရမယ်"
ဒေါက်တာစုလည်း " ဟုတ်ကဲ့အချိန်မရွေးလာပါရှင်" ဆေးခန်းလေးလည်း မိန်းမပျိုလေးတွေ ရီသံနဲ့ စိုပြည်လျှက်